Indlu yeSpruce kwiGooseberry Creek
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLaura + Danny
Wamkelekile kwi-Spruce House, indawo yakho yokuphumla yasentabeni evulekileyo kumlanjana omhle omncinci, kwaye unokuhamba ukuya kwiDolophana yaseTannersville... ngenene eyona ilungileyo kuzo zonke iiCatskills ezinokuthi zinike!
Umtsalane wethu wasekhaya ubandakanya: iKaaterskill Falls, North South Lake State Park, Tannersville Village, Hunter Mountain, Wyndham Mountain, Roaring Kill Trail, Platte Clove Preserve, Colgate Lake Wild Forest Park, Mountain Top Arboretum, nokunye okuninzi!
I-Spruce House yindawo yokuhlala ehlaziyiweyo enamagumbi amabini okulala abucala, indawo yokuhlambela egcweleyo, ikhitshi egcweleyo, kunye nesicwangciso somgangatho ovulekileyo wokuhlala / indawo yokutyela.
Yehla ngezinyuko zangaphandle ukuya kwiyadi yangasemva yabucala, ugqibelele ngegrill yokupheka, kunye nefenitshala eninzi yokuphumla ngasemgodini womlilo. Qhubeka wehla ngendlela emfutshane, ukuya kowakho umjelo omhle, olungele ii-ops zeefoto, ukutshiswa lilanga kunye nokupholisa phantsi. Indlela inokuba manzi kancinci, ke yiza neebhutsi zakho :)
Sebenza kwaye udlale usekhaya nge-wifi elula neyomeleleyo, i-smart tv enkulu, kunye nesithethi sebluetooth kumculo wakho.
Siyavuya ukuba sisilwanyana-nobubele kwisilo-qabane sakho esinobuhlobo! Nceda usazise ukuba ungathanda ukuza nenja yakho xa ubuza, kwaye siyakuvuma ngokwetyala ngokwetyala. Sikhetha inja enye, ngaphantsi kweeponti ezingama-50. Enkosi! Eyam
Yonwabela indawo yakho ethe cwaka kunye neyimfihlo yentaba, kodwa kwakhona ... ngena eLalini! Uyakufumana yonke into oyifunayo kanye eDolophini: iindawo zokutyela ezinkulu, iibhari, iivenkile, iindawo zekofu, indawo yokuhlamba impahla, ivenkile yewayini, kunye nevenkile yokutya. Qhuba i-10 min ukuya kwindawo engakholelekiyo yeKaaterskill Falls kunye nePaki yaseMantla eSouth Lake State, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, ulwandle, ukuqubha kunye nokuhamba ngesikhephe. Ungaphoswa yiHuckleberry Trail kunye neLake Rip Van Winkle ebekwe kanye ecaleni kwendlu, xa uhamba ungena eLalini! Kwaye mhlawumbi eyona ilungileyo: I-Platte Clove Gcina iimayile ezimbalwa nje ukusuka endlwini, kunye neendlela ezimangalisayo zeengxangxasi, kunye neendlela ezininzi zokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Laura + Danny
Sihlala nje imizuzu engama-20 phantsi kwentaba, kwaye sifumaneka ngefowuni ngamaxesha onke. Sithumele umyalezo okanye usitsalele umnxeba nangaliphi na ixesha!
ULaura + Danny yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tannersville